DOWNLOAD Ants Aussie ọdụ ụgbọ elu Hamilton YHML FSX - Rikoooo
Portsgbọ elu Ants Aussie Hamilton YHML FSX
Nchekwa onwe-emelitere na 10, nkwekorita P3D
Aka onye na-enwe mmasị dị egwu ọdụ ụgbọelu! Ọma a ọdụ bụ mma m achọ ịma egwu otú ị agbarapụ chọrọ ka ọ na-adịghị gị?
N'ọdụ ụgbọ atụmatụ omenala mere 3D ihe dabeere na photos nke ahụ n'ezie ọdụ na nanị ndabere ihe ịbụ otu n'ọkwá. Ihe ruru 40 sq km nke photoreal n'ala textures gburugburu ọdụ na-gụnyere.
Hamilton emi odude ke n'ebe ọdịda anyanwụ Victoria nso Grampian MTS. N'ọdụ ụgbọ nwere a kara akara na udo isi runway na a gravel cross runway. Mgbe njem ọrụ na Adelaide na Melbourne na-ejikwara site Sharp Airlines na a nsoro nke Metros.
Goga ọdụ ụgbọ elu, gaa na onye njikwa ụgbọ elu nke FSX na ụdị YHML na ICAO ohere
Airport aha: Hamilton Aero
Elu: 3.962m, 13 ft
Onye ahụ dị:
10 / 28: 1233m x 30m Red Ajịrịja nkume
ATS Communications akụrụngwa:
CTAF 124.2 Hamilton okporo ụzọ
RADIO igodo na ọdịda AIDS: